1 Korintofo 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nea Edi Kan a Ɔde Kɔmaa Korintofo 9:1-27
Nhwɛso a Paul yɛe sɛ ɔsomafo (1-27)
“Nkyekyere nantwi ano” (9)
“Sɛ manka asɛmpa no a, minnue!” (16)
Mayɛ biribiara ama nnipa nyinaa (19-23)
Ɛsɛ sɛ yɛhyɛ yɛn ho so wɔ nkwa mmirikatu no mu (24-27)
9 Menne me ho anaa? Menyɛ ɔsomafo anaa? Minhuu yɛn Awurade Yesu anaa?+ Ɛnyɛ mone m’adwuma wɔ Awurade mu anaa? 2 Sɛ menyɛ ɔsomafo mma ebinom mpo a, mo de, meyɛ ma mo! Mone ahyɛnsode a esi so dua sɛ meyɛ Awurade somafo. 3 Wɔn a wɔkasa tia me no, nea mewɔ ka kyerɛ wɔn ni: 4 Yɛwɔ hokwan* sɛ yedidi na yɛnom, ɛnte saa? 5 Yɛwɔ hokwan sɛ yɛware ɔbea a ɔyɛ gyidini na yɛde no ka yɛn ho+ sɛnea asomafo a aka no ne Awurade nuanom+ ne Kefa*+ yɛe no, ɛnte saa? 6 Anaa me ne Barnaba+ nko ara na yenni ho kwan sɛ yegyae adwuma a yɛyɛ de hwɛ yɛn ho no? 7 Ɔsraani bɛn na ɔno ara tua ne ho ka? Hena na ɔyɛ bobefuw* a onni mu aba?+ Anaasɛ hena na ɔhwɛ mmoa a ɔnnom wɔn nufusu no bi? 8 Nnipa adwene na mede reka nsɛm yi anaa? Ɛnyɛ saa na Mmara no nso ka anaa? 9 Na wɔakyerɛw wɔ Mose Mmara no mu sɛ: “Sɛ nantwi reporow hwiit* a, ɛnsɛ sɛ wokyekyere n’ano.”+ Anantwi na wɔn ho hia Onyankopɔn anaa? 10 Anaa yɛn mmom nti na ɔkaa saa? Nea ɛwom ne sɛ, yɛn nti na wɔkyerɛwee, efisɛ nea ofuntum asaase ne nea ɔporow awi no, ɛsɛ sɛ wɔyɛ saa a wɔwɔ anidaso sɛ wobenya wɔn kyɛfa. 11 Sɛ yɛadua honhom fam nneɛma wɔ mo mu, na sɛ yetwa honam fam nneɛma fi mo hɔ a, ɛboro so anaa?+ 12 Sɛ afoforo wɔ hokwan* sɛ wonya nneɛma a ɛte saa fi mo hɔ a, ɛnde yenni hokwan mmoro saa? Nanso yɛmfaa saa hokwan no nyɛɛ adwuma,+ na mmom yɛde animia gyina tebea biara mu, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛremfa biribiara nsiw Kristo asɛmpa no kwan.+ 13 Munnim sɛ wɔn a wɔyɛ adwuma kronkron no di asɔrefi nneɛma no bi anaa? Na munnim sɛ wɔn a wɔsom wɔ afɔremuka ho daa no nso nya wɔn kyɛfa fi afɔremuka no so anaa?+ 14 Saa ara nso na Awurade ahyɛ sɛ, wɔn a wɔka asɛmpa no mfa asɛmpa no so ntena ase.+ 15 Nanso memfaa nhyehyɛe yi mu baako mpo nnii dwuma.+ Nokwasɛm ne sɛ, ɛnyɛ sɛ merekyerɛw eyinom na ama me nsa aka saa nneɛma no; anka eye ma me sɛ mewu mmom. Obiara rentumi nnye nea mede hoahoa me ho no mfi me nsam!+ 16 Sɛ meka asɛmpa no a, ɛnyɛ ade a ɛsɛ sɛ mede hoahoa me ho, efisɛ ɛyɛ asɛde a ɛda me so. Sɛ manka asɛmpa no a, minnue!+ 17 Sɛ miyi me yam yɛ a, mewɔ akatua; na sɛ mede amemenemfe yɛ mpo a, ne nyinaa mu no, wɔde ofiehwɛ adwuma bi ahyɛ me nsa.+ 18 Ɛnde, dɛn ne m’akatua? Ɛne sɛ, sɛ mereka asɛmpa no a, mede asɛmpa no bɛma kwa, sɛnea ɛbɛyɛ a meremfa tumi* a asɛmpa no ama manya no nni dwuma ɔkwammɔne so. 19 Ɛwom, menne onipa biara ka,* nanso mayɛ me ho akoa ama obiara, sɛnea ɛbɛyɛ a menya nnipa dodow biara a metumi. 20 Meyɛɛ me ho sɛ Yudani maa Yudafo, sɛnea ɛbɛyɛ a menya Yudafo.+ Wɔn a wɔwɔ mmara ase no, meyɛɛ me ho sɛ obi a ɔwɔ mmara ase maa wɔn, ɛwom sɛ m’ankasa minni mmara ase de, sɛnea ɛbɛyɛ a menya wɔn a wɔwɔ mmara ase no.+ 21 Wɔn a wonni mmara no, meyɛɛ me ho sɛ obi a onni mmara maa wɔn, sɛnea ɛbɛyɛ a menya wɔn a wonni mmara no. Ɛno nkyerɛ sɛ minni mmara ase wɔ Onyankopɔn mu; mewɔ mmara ase wɔ Kristo mu.+ 22 Wɔn a wɔyɛ mmerɛw no, meyɛɛ mmerɛw maa wɔn, sɛnea ɛbɛyɛ a menya wɔn a wɔyɛ mmerɛw.+ Mayɛ biribiara ama nnipa ahorow nyinaa, sɛnea ɛbɛyɛ a mɛfa ɔkwan biara so agye ebinom nkwa. 23 Asɛmpa no nti na meyɛ ade nyinaa, na ama matumi aka bi akyerɛ afoforo.+ 24 Munnim sɛ wɔn a wotu mmirika de si akan no, wɔn nyinaa tu mmirika no bi de, nanso ɔbaako pɛ na onya abasobɔde* no? Muntu mmirika no wɔ ɔkwan bi so a ɛbɛma moanya abasobɔde no.+ 25 Obiara a osi akan no* hyɛ ne ho so wɔ nneɛma nyinaa mu. Wɔyɛ saa na wɔanya abotiri a ɛsɛe,+ na yɛn de, yɛyɛ saa na yɛanya abotiri a ɛnsɛe.+ 26 Ne saa nti, mmirika a meretu no, mintu no biarabiara;+ twɛre a meretotow no, mehwɛ na mantoto no sɛnea mereboro mframa; 27 mmom meboro me nipadua,*+ na mehyɛ no sɛ akoa, sɛnea ɛbɛyɛ a meka asɛm no kyerɛ nkurɔfo wie a, me ara mammɛyɛ obi a ɔkwan bi so no ɔmfata.
^ Nt., “tumi.”
^ Anaa “hokwan.”
^ Anaa “made me ho afi nnipa nyinaa ho.”
^ Anaa “nkonimbo.”
^ Anaa “Mmirikatufo biara.”
^ Anaa “mehyɛ me nipadua ahometew; midi me nipadua nya; metwe me nipadua aso.”
1 Korintofo 9